Roobka Dayrta oo ka bilaabmay deegaanada Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandRoobka Dayrta oo ka bilaabmay deegaanada Puntland
Roobka Dayrta oo ka bilaabmay deegaanada Puntland
October 12, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Roobabkii Dayrta ayaa maanta oo Arbaco ah ka curtay gobolada Puntland iyadoo lagu jiray xilli abaar ah oo kulul.
Roobka ayaa ka da’ay deegaano kuyaala gobolada Bari, Karkaar iyo Nugaal, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Xilli roobaadka Dayrta ayaa ah xilli roobaadka ugu yare e labada xilli roobaad ee dhulka Soomaaliya laga helo.
Garoowe oo roobsatay
Roobka oo biyo dhigay wadooyinka magaalada. [Sawirka: Puntland Mirror]
Magaalada Garoowe ee caasimada Puntland ayaa maanta waxaa ka da’ay roob fiican oo ay ku diirsadeen dadka magaalada.
Roobka ayaa wakhtigii duhurnimada ka bilaabmay magaalada isagoo biyo dhigay wadooyinka waa-weyn ee ay magaalada caanka ku tahay.
Si kastoo ay ahaataba bishaan Oktoobar iyo bisha ku xigtaa ayaa la filayaa in roobka Dayrta ay ka da’a deegaanada.
November 9, 2017 Golaha wasiiradda Puntland oo Somaliland uga digay in ay sanaadiiqda doorashada geeyaan gobolada Sool, Cayn, Sanaag iyo Hayland
October 10, 2017 Ciidanka Aminga Puntland oo sheegay in howlgal ay ka sameeyeen buuraha Galgala ay ku dileen dagaalyahano katirsan Al-Shabaab
October 18, 2017 Puntland oo daawooyin iyo dhaqaatiir caafimaad geysay Muqdisho
October 9, 2017 Ugu yaraan todobo qof oo ku geeriyooday weerar ay maleeshiyada Al-Shabaab ku qaadeen kantaroolka magaalada Boosaaso
National armed forces to deploy into Galkayo, Somalia’s minister of information appeals
Labo kamid ah ciidamada dowlada federaalka Soomaaliya oo isku soo dhiibay Puntland
Muqdisho-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa qorsheynaysa in ay dhisto ciidamo gaaraya 30,000 si ay u badalaan xoogaga AMISOM ee jooga dalka, sida uu sheegay masuul dowladda katirsan. Wareysi ay la yeelatay wakaalada wararka dowladda ee Sonna, Wasiirka [...]
IGAD heads of state summit concluded in Mogadishu
Mogadishu-(Puntland Mirror) The summit of the heads of state of the Intergovernmental Authority on Development (IGAD) concluded in Mogadishu on Tuesday afternoon. During the summit, South Sudan’s civil war as well as preparations for Somali [...]
Golaha wasiiradda Puntland oo Somaliland uga digay in ay sanaadiiqda doorashada geeyaan gobolada Sool, Cayn, Sanaag iyo Hayland
Garoowe-(Puntland Mirror) Golaha wasiiradda Puntland ayaa sheegay in gobolada Sool, Cayn, Sanaag iyo Hayland aysan ka dhici doonin doorashada Somaliland, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay shirkii asbuuclaha ahaa ee golaha. Golaha wasiiradda ayaa intaas [...]